गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलः ३ वर्षमा ३५ प्रतिशत मात्र काम - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलः ३ वर्षमा ३५ प्रतिशत मात्र काम
सुदिप भण्डारी पुस २७
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई पायक पर्ने गरी ३ वर्षअघि भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ साल माघ १ गते विमानस्थल निर्माणको शिलन्यास गरेका थिए। त्यसबेला २०१७ को डिसेम्बरसम्म स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न हुने र २०१८ मा अन्तराष्ट्रिय उडान सुरु हुने गरी निर्माण थालिएको थियो। निर्माण कम्पनीसँग पनि त्यही तरिकाले सम्झौता भयो। तर हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्र निर्माण कार्य भएको छ। तोकिएको समयमा अत्यन्तै कम मात्र काम भएपछि ठेकदार कम्पनीसँगको सम्झौताको म्याद ६ महिना थप गरिएको छ।
गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख ओम शर्माले मधेश आन्दोल लगायतका समस्याहरुका कारण ढिलाइ भएको बताए। ‘काबुबाहिरको परिस्थिति आयो, मधेश आन्दोलन नाकाबन्दीजस्ता कारणले काम अघि बढ्न सकेन’ उनले भने ‘आउँदो असारसम्मलाई म्याद थपिएको छ।’
विमानस्थल स्तरोन्नतिमा ढिलाइ हुनुमा राजनीतिक कारण मात्र छैन। चिनियाँ र नेपाली ठेकदारबीचको विवादले पनि महिनौं काम अवरुद्ध भएको थियो। गत चैत्र महिनामा मुख्य ठेकदार चिनियाँ कम्पनी नर्थवेष्ट सिभिल कन्सट्रक्सन ग्रुप लिमिटेड र सब कन्ट्रयाक्टर नर्थवेस्ट नेपाल इन्फा प्रालिबीच कारोबार नमिल्दा निर्माण कार्य रोकिएको थियो। नेपाल इन्फा प्रालिले काम छोडेपछि अहिले सबै काम चिनियाँ कम्पनीले नै गरिरहेको छ।
थपिएको म्याद असारसम्म पनि अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न हुने कुनै आधार देखिँदैन। त्यसपछि पुनः म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। ‘त्यसबेला पनि काम नसकिएमा आयोजनासँग म्याद थप्ने वा जरिवाना तिराउने विकल्प हुन सक्छ। अवस्था हेरेर त्यसबेला निर्णय हुन्छ।’ आयोजना प्रमुख शर्माले भने, ‘तर सम्झौता तोड्ने परिस्थिति नआउला, पछिल्लोपटक कामले गति लिएको छ। सम्झौता तोडेर समाधान पनि हुँदैन।’
६ महिनामा निर्माणको काम पूरा नभए पनि सन २०१८ को अन्त्यसम्म निर्माणको मुख्य पाटो सकिने आयोजनाको दाबी छ। तर सबै काम सम्पन्न हुनेमा भने आयोजना प्रमुख पनि विश्वस्त छैनन्। ‘एक वर्ष भित्र मुख्य काम सकिन्छ, सानातिना फिनिसिङका काम बाँकी रहलान् ७० प्रतिशत काम सकियो भने पनि उपलब्धि मान्नुपर्छ,’ आयोजना प्रमुख शर्माले भने।
संस्कृति तथा पर्यटनविद् डा. गीतु गिरीले निर्माणको काममा धेरै ढिलाइ हुनै नहुने बताए। ‘अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको ढिलाइले सरकारलाई करोडौं नोक्सान भएको छ।’ उनले भने, ‘यो जति चाँडो बन्यो नेपालको पर्र्यटकीय विकासमा त्यति नै बढी फाइदा छ। यहाँको पर्यटकीय विकासले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ।’
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको लागि शिलन्यास हुँदा यस क्षेत्र उत्साहित बनेको थियो। ‘३ वर्षअघि शिलन्यास हुँदा निकै खुसी भएका थियौं। अब यस क्षेत्रको विकास हुने भयो भनेर, ढिलाइ भइरहँदा दुःख लागेको छ।’ सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले भने, ‘अब कत्ति पनि ढिलाइ हुनु हुँदैन। यही कुरा हामीले आयोजना प्रमुखलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ।’
अहिले विमानस्थल निर्माणको लागि टर्मिनल भवनलगायतका संरचनाहरुको काम भइरहेको छ। साथै धावनमार्गतर्फ पिचको लागि आवश्यक तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। धावनमार्गमा सबबेस, बेस र पिच गरी ३ लेयरको काम हुन्छ। सबबेसको काम सकिएर बेस निर्माणको लागि सामग्री जुटाउने काम भइरहेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए। ‘स्थानीय खोला तथा दाङको राप्ती नदी लगायतका बाहिरी जिल्लाबाट पनि गिटी लगायतका आवश्यक सामग्री जुटाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ‘एकलाख घनमिटर भन्दा बढी यस्ता मेटेरियल्स चाहिन सक्छ।’
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको लागि ७ सय ८७ विघा जग्गा छुट्याइएको छ। जग्गाको मुआब्जामा मात्र २३ अरब खर्च हुँदै छ। मुआब्जाअन्तर्गत ४ अरब रुपैँया बाँडिसकिएको छ। हालसम्म ८ सय जनाले मुआब्जा बापतको रकम लिएका छन्। मुआब्जाबाहेक निर्माणमा मात्र ६ अरब २२ करोड रुपैँया लागत रहेको छ। लागत मध्ये एडिबीको १८ प्रतिशत अनुदान, ७१ प्रतिसत एडिबीकै ऋण सहयोग र बाँकी ११ प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भएमा यस क्षेत्रको कायापलट हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस वर्ष स्वदेशी र विदेशी गरेर १४ लाख पर्यटकले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन्। त्यसमध्येमा करिब डेढ लाख जति तेस्रो मुलुकका छन्। ‘अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल तयार भएमा २०–२५ लाख विदेशी पर्यटक आउन सक्नेछन्। त्यही प्रक्षेपण गरेर नै एडिबीले पनि लगानी गरेको छ।’ संस्कृति तथा पर्यटनविद् डा. गीतु गिरीले भने। स्थलमार्गबाट सबैभन्दा बढी पर्यटक रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट भित्रिने गर्दछन्।
‘हवाइ मार्गबाट पनि पर्यटक भित्र्याउन सकियो भने त यस क्षेत्रको मात्र नभइ समग्र मुलुककै आर्थिक विकास हुन्छ।’ सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले भने ‘यसबाट लुम्बिनीमा सहज तरिकाले विश्वका बुद्धिष्टहरु आउन सक्छन्।’
‘एसियाली मुलुकसहित विश्वका विभिन्न स्थानमा ठूलो संख्यामा बुद्ध धर्मावलम्बी छन्। बुद्ध जन्मस्थल आउन धेरैले चाहाना राखेका हुन्छन्। बुद्ध दर्शनको लागि विभिन्न मुलुकमा पुग्दा लुम्बिनी आउन चाहने मान्छे थुपै्र भेट्टाएँ। तर समस्या यातायातको हो लुम्बिनी पुग्न सजिलो छैन।’ लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष मैत्रीय भन्ते भन्छन्, ‘भारतले बोधगया जस्तो ठाउँमा विमानस्थल बनाउँदा श्रीलंका, थाइल्याण्ड जस्ता मुलुकका पर्यटक सीधै बोधगया झरेर आएका छन्, हामीकहाँ पनि प्रचुर सम्भावना छ। अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो भने लुम्बिनी आउने पर्यटकहरु सोझै यहीँ आउने छन्।’
प्रकाशित २७ पुस २०७४, बिहिबार | 2018-01-11 13:07:27